YEYINTNGE(CANADA): Monday, March 21
Australiaနိုင်ငံမှNew South Walesပြည်နယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ ရွေ့ ရှားသွားခြင်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/21/20110အကြံပြုခြင်း
21 March 2010 ရဲရင့်ငယ် ဒိုင်ယာရီ
Yes or No.jpg
myanmar's Internet revolution.pdf
21 March 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
21 March 2011 Yeyintnge's Diary.doc
ABMA Journal Volume2No 6.pdf
2515K View Download
21 March 2011 Yeyintnge's Diary
လစ်ဗျားအာဏာရှင်ကို နိုင်ငံတကာက စစ်ရေးအရ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် အားတက်စရာ ဖြစ်လာကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် R2P (Responsibility to Protect) စနစ်နဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အတွက်လည်း လမ်းကြောင်း ပွင့်သွားပြီလို့ ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားနေသူတွေက ရှုမြင်ကြပါတယ်။
ဒီအကြောင်း RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင်က တင်ပြထားပါတယ်။
နေပြည်တော်တွင် ပြည့်တန်ဆာ စစ်ဆင်ရေး ပြုလုပ်
နေမျိုးဦး၊ ၊စစ်အစိုးရ ရုံးစိုက် ရာ နေပြည်တော် မြို့ ရှိ အနှိပ် ခန်း များ ၊ဗြူတီဆလွန်း၊
ဟိုတယ် များ ၊ဘား ၊ညကလပ်နှင့် ကာရာ အိုကေ အပန်းဖြေခန်း များ ကို ယမန် နေ့ ည မှ
ယနေ့ မနက် အရုဏ် တက်ချိန် ထိ အာဏာပိုင်များက၀င်ရောက်ဖမ်း ဆီးရာ ပြည့်တန် ဆာ
နှင့် ဖျော်ဖြေရေး အပျော်မယ် ၄၀၀ ကျော်အဖမ်းခံထားရသည် ဟု Freedom News Group
မှ သတင်းရရှိသည်။ထိုသို့ ဖမ်းဆီး ရာ တွင် လူမှား ပြီး ဖမ်းဆီးမှု များ လည်း ရှိကြောင်း နေပြည်တော် မြို့ ရှိ ဟိုတယ်
တစ်ခု မှ မန်နေဂျာ တစ်ဦး က ပြောသည်။ ကောင်မလေးတွေ သူတို့ အတွဲ နဲ့ သူ တို့ လာကြာ
တာ ကို အော်ကွီး (ပြည့်တန် ဆာ)ဆိုပြီးဖမ်း တယ်။ ကောင်မလေးတွေ က ငြင်းတယ်။ မဟုတ်
ပါဘူး ကျွန်မ တို့ ရိုးရိုးကာရာ အိုကေ လာဆိုတာ ပါ လို့ ပြောတာ ရဲတွေ က ဖာသည်မ တွေ နင်
တို့ လာမငြင်း နဲ့ အကြောင်း မသိရင် ခက်မယ် ဆိုပြီး ပြန်ပြောတော့ ကောင်မလေးတွေ ကို
ငိုကြတာ ညက နေပြည်တော် နဲ့ ပျဉ်းမနား မှာ ၀ုန်းဒိုင်း ကြဲနေတာ ပဲ ဟု ပြောသည်။
နေပြည်တော် မြို့ တွင် ယခု ကဲ့သို့ ဖမ်းဆီးခြင်းမှာ တပ်မတော်နေ့နီးကပ်လာခြင်း ဖြစ်
သည် ဟု ထင်ကြေး ပေးကြသော် လည်း လိင်အလုပ်သမ များ မှာ ထိုင်း နှင့် အမေရိကန်
ထောက်လှမ်းရေး များ နှင့် အဆက်အသွယ် ရှိသောကြောင့် ဖမ်းဆီး ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု
လည်း နေပြည်တော် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဌာန မှ အရာ ရှိ တစ်ဦး က Freedom News
နေပြည်တော်တွင် လတ်တလော ဉ် ဟိုတယ် အသစ်များ ဖွင့်လှစ်နေပြီး ထိုဟိုတယ် များဉ်
ဧည့်သည် များ စည်ကား ရန် အတွက် အချို့ ဟိုတယ်များမှ အပျော်မယ် များထားကြသည် ဟု
ဟိုတယ်မန်နေဂျာ တစ်ဦး က ပြောသည်။
ဖမ်းဆီး မှုမှာ ဟိုတယ် များ ရှိသည့် ဥတ္တရ သီရိ နှင့် ပုဗ္ဗသီရီ မြို့ နယ်များ တွင် အများ ဆုံး
ဖြစ်သည်။ ကာရာအိုကေ ခန်းများ တွင် ဖမ်းဆီးမှု များ မှာအများ ဆုံး ဖြစ်ပြီး အဖမ်းခံရသည့်
အမျိုးသမီးများ မှာ အနယ်အနယ် အရပ်ရပ် က လာရောက် အလုပ်လုပ် ကိုင် သူများ ဖြစ်သည်။
နေပြည်တော် တွင် မြန်မာ ပြည့်တန်ဆာ ဈေးကွက် အပြင် အရှေ့ ဥရော ပ နှင့် ထိုင်း နိုင်ငံမှ
ပြည့်တန်ဆာ ဈေးကွက် လည်း ရှိပြီး မြန်မာ ၀ီကီလီခ် က မကြာခင် မှာ ပင် နေပြည်တော်ပြည့်
တန်ဆာဈေးကွက် အကြောင်း ကို ဖွင့်ချမည် ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက်ကြောင့် နောက်ထပ်အုံကြွလာနိုင်သလား
မန္တလာမောင် | တနင်္လာနေ့၊ မတ်လ ၂၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၀၃ မိနစ်
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အင်တာနက်နှင့် လူမှုမီဒီယာများမှတဆင့် သတင်း များပျံ့နှံ့သွားခြင်းကြောင့် တူနီးရှား၊ အီဂျစ်၊ ဘာရိန်း၊ ယီမင်နှင့်လစ်ဗျားတို့တွင် ဆူ ပူအုံကြွမှုဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်လာသည့်အတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရကလည်း နိုင်ငံတွင်းရှိလူငယ်များ အတုခိုးလိုက်လုပ်မည်ကို စိုးရိမ်ကြောင့်ကြနေသည်။
စစ်အစိုးရ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို အကောင်းဆုံးပြနေသည်က အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု အလွန်နှေးကွေးနေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ဒီတော့ အင်တာနက်မှ အစပြုသည့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း တော်လှန်ရေးမျိုး မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရော ပုံတူ မဖြစ်တော့ဘူးလား။ မြန်မာပြည် အခြေအနေကို အနီးကပ် စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်လျှင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထူးခြားသော အခြေအနေများနှင့် ခေတ်နောက်ကျမှုများကို လေ့လာကြည့်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲများ ပေါ်ထွက်လာရေး၌ အင်တာနက် အခန်းကဏ္ဍ အလွန်နည်းပါးသည် ဆိုသည်ကို သိမြင်နိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထူးခြားသော အခြေအနေများနှင့် ခေတ် နောက်ကျမှုများကို လေ့လာကြည့်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲများ ပေါ်ထွက်လာရေး၌ အင်တာနက် အခန်းကဏ္ဍ အလွန်နည်းပါးသည် ဆိုသည်ကို သိမြင် နိုင်သည်။
နိုင်ငံတွင်း၌ အခြေအမြစ်ကစ၍ ပြောင်းလဲမှုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုသည်မှာ အခြား အကြောင်းအချက်များ ပေါ်ပေါက် ပါဝင်လာမှသာ ဖြစ်နိုင်မည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အင်တာနက် ဆက်သွယ်ရေးအကြောင်း ကြည့်ကြရအောင်။ အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်သော မြို့ဆို၍ အဓိကအားဖြင့် ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမြို့ကြီးနှစ်မြို့သာ ရှိသည်။ အင်တာနက်ကိုလည်း အများအားဖြင့် အင်တာနက်ကဖေးဆိုင်များတွင်သာ အသုံးပြုကြရသည်။ ယင်းဆိုင်များသည် အစိုးရ၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းဖြစ်သော မည်သည့်ဝက်ဆိုက်များသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည်ဆိုသည်ကို မှတ်သားထားနိုင်သည့် URL-tracking software ထည့်သွင်းထားရသည်၊ ဆိုင်တွင်း အသုံးပြုသူများကို စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့် စီစီတီဗွီ ကင်မရာများ တပ်ဆင်ထားကြရသည်။
အစိုးရက ပိတ်ပင်ထားသော ဝက်ဆိုက်များသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း မပြုရန် အဆိုပါဆိုင်များတွင် တားမြစ် ပိတ်ပင်ထားသည်ကိုမူ ပြောရန်ပင် မလိုပါ။
အင်တာနက် အသုံးပြုသူဦးရေကို လေ့လာကြည့်လျှင် မြန်မာပြည်၏ စိတ်ပျက်ဖွယ် ပကတိ အခြေအနေကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ၂ဝ၁ဝ တွင် နိုင်ငံလူဦးရေ ၅၅ သန်း ၏ ဝ.၂ ရာနှုန်း ဖြစ်သော ၁၁ဝ,ဝဝဝ သာ အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး တရုတ်ပြည်တွင် စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ၃ဝ ရာနှုန်း က အင်တာနက်ကို ပုံမှန်အသုံးပြုနေသည်။
အင်တာနက် အသုံးပြုသူ ၅ သိန်းခန့်ရှိသည်ဟု ပိုပိုသာသာခန့်မှန်းလျှင်ပင် အခြေအနေမှာ မကောင်းလှပါ။ ထို့ပြင် အင်တာနက်ကို သတင်းရရှိရာ ရေသောက်မြစ်အဖြစ် အသုံး ပြုခြင်းမှာလည်း အကန့်အသတ်နှင့်သာရှိသည်။ စစ်အစိုးရကို ဝေဖန်ပြောကြားသည့် ဝက်ဆိုက်များကို တားဆီး ပိတ်ပင်ထားသည်။ ထိုအထဲတွင် ဖိုင်နင်ရှယ်တိုင်းနှင့် ဘန်ကောက်ပို့စ်လို ဘာမှမဆိုင်သည့် သတင်းစာကြီးများ၏ ဝက်ဆိုက်များလည်း ပါဝင်သည်။
ပိုဆိုးသည်မှာ တွစ်တာ နှင့် ယူကျု ကိုပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ကိုမူ ဝင်ကြည့်၍ရသည်။ သို့သော် မိမိဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်မှ စာတစောင်ပို့၍ရသည်ဆိုလျှင် ထီပေါက်သလောက် ဝမ်းသာရသည်။
အင်တာနက် သုံးစွဲခြင်းနှင့် လူဦးရေ စာရင်းအင်းများ
အသုံးပြုသူ လူဦးရေ ရာခိုင်နှုန်း ဂျီဒီပီရာခိုင်နှုန်း ရင်းမြစ်
၂၀၀၀ ၁၀၀၀ ၅၄,၀၂၁,၅၇၁ ၀.၀၀၂ % မသိ ITU.
၂၀၀၈ ၄၀, ၀၀၀ ၄၇,၇၅၈,၁၈၁ ၀.၁ % ၄၇၉ ITU.
၂၀၀၉ ၁၀၈၉၀၀ ၄၈,၁၃၇,၇၄၁ ၀.၂ % ၄၅၉ ITU.
၂၀၁၀ ၁၁၀၀၀၀ ၅၃,၄၁၄,၃၇၄ ၀.၂ % ၄၆၉ ITU.
မှတ်ချက်။ လူတဦးကျဂျီဒီပီတန်ဘိုးများမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ဖြစ်သည်။ ရင်းမြစ်-နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့
လူငယ်အင်တာနက် အသုံးပြုသူများက ပိတ်ဆို့ထားသော ဝက်ဆိုက်များကို ဘယ်လို ကျော်လွှား ဝင်ကြည့်ရမည်ဆိုသည်ကို သိသည်။ အစိုးရ၏ စောင့်ကြပ် ထောက်လှမ်းနေမှုကလည်း ကြောက်စရာ ကောင်းသည်၊ အင်တာနက် မြန်နှုန်း နှေးကွေးလွန်းမှုက စိတ်တိုစရာ၊ မကြာခဏ မီးပျက်ခြင်းက စိတ်ပျက်စရာ။ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မကြာခင်က တပ်ဆင်လိုက်သည့် `မြန်နှုန်းမြင့်´ ဘရော့ဘန်အင်တာနက် ဆိုသည်ကလည်း ကြေညာထားသည့်အတိုင်း မမြန်၊ မြန်နှုန်းမြှင့်ဘို့ လိုနေသေးသည်။
ရန်ကုန်တွင် ဖန်နန်းမျှင် အင်တာနက်ကြိုးများ တပ်ဆင်နေသည်။ သို့သော် ကြော်ငြာ ထားသည့် ၃ဝ Mbps ဆိုသည့် မြန်နှုန်းကို ဘယ်အခါမျှမရပါ။ ကနဦး တပ်ဆင်ခ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉ဝဝ နှင့် လစဉ်ကြေး ၃၅ မှ ၁၁ဝ ဒေါ်လာဆိုသည်ကလည်း တလလျှင်ပျှမ်းမျှ ဒေါ်လာ ၃ဝ သာဝင်သည့် သာမန်ပြည်သူများ လက်လှမ်းမီသည့် ငွေကြေးမဟုတ်ပါ။
အာရပ်နိုင်ငံများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့အကြား အဓိက ကွာခြားချက်ကြီးများကြောင့် မကြာမတင် ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် နောက်ထပ် ဆူပူအုံကြွှမှုတခု ဖြစ်လာမည့် အရေးမှာ စိတ် ကူးကြည့်ရန်ပင် ခဲယဉ်းသည်။
အခြားသော ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာများကလည်း မြန်မာပြည်၏ အခြေခံ အဆောက်အဦး ခေတ်နောက်ကျမှု ကို ပြသနေသည်။ တကမ္ဘာလုံးတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုသည်မှာ မရှိမဖြစ် အရေးပါသော ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတခု ဖြစ်နေသည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင်တော့ မဟုတ်ပါ။ အများဆုံးခန့်မှန်းသည့် စာရင်းများအရပင် လူဦးရေ ၃.၇ ရာနှုန်းသာ မိုဘိုင်းဖုန်းကိုင်နိုင်ပြီး မိုဘိုင်းဖုန်း အရေအတွက် စုစုပေါင်း ၂ သန်းသာ ရှိသည်။ ဤနှုန်းမှာ ရယ်စရာကောင်းလောက်အောင် နိမ့်ကျသည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းများမှာ ဈေးကြီးလှပြီး အီးမေးလ် နှင့် အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးများ လုပ်မရပါ။ အစိုးရက ချုပ်ကိုင်ထားသည့် အနည်းငယ်မျှသော မိုဘိုင်းဖုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကုမ္ပဏီများကလည်း နိုင်ငံတကာ SMS နှင့် နိုင်ငံတကာ roaming ဝန်ဆောင်မှုများကို မပေးပါ။ ဂျီအက်စ်အမ် မိုဘိုင်း ဆင်းကဒ်များ၏ ဈေးကွက် ပေါက်ဈေးများ မကြာသေးခင်က ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။
တယ်လီဖုန်းမပါ ဂျီအက်စ်အမ်ဆင်းကဒ် သက်သက်ဆိုလျှင် မှောင်ခိုဈေးကွက်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄ဝဝ မှ ၁၆ဝဝ သာ ရှိတော့သည်။ အဆိုပါဆင်းကဒ်များ၏ တရားဝင်ဈေးနှုန်းမှာ ဒေါ်လာ ၁၇ဝ သာရှိသော်လည်း ထိုဈေးနှင့်မည်သူမျှ မရောင်းလိုကြပါ။ ကြိုတင်ငွေပေး စီဒီအမ်အေ ဆင်းကဒ်များကို ဒေါ်လာ ၆ဝဝ နှင့် ရောင်းမည်ဟူသော အစီအစဉ်သစ်တခု ပေါ်ထွက်လာပြန်သည်။ အပြင်ဈေး ဘယ်လောက်ဖြစ်မည် ဆိုသည်ကိုမူ စောင့်ကြည့်ရဦးမည်။
လိုင်းဖုန်းများသည်ပင် လူအများ မတတ်နိုင်သည့် ဇိမ်ခံပစ္စည်း ဖြစ်နေသည်။ အိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်သာ အိမ်ဖုန်း ရှိကြသည်။ ဖုန်းပါလျှင် ရန်ကုန်မြို့မှ သာမန်အိမ်ခန်းတခန်း၏ ငှားရမ်းခသည် ဖုန်းမပါသော အလားတူအခန်းနှင့်စာလျှင် ၅ဝ ရာနှုန်း မျှ ဈေးမြင့်သည်။ နောက်ဆုံးရ ကိန်းဂဏန်းများအရ လူဦးရေ ၁ ရာနှုန်းသာ အိမ်တွင်လိုင်းဖုန်းရှိကြသည်။
အစိုးရက လူထုကို သတင်းမှောင်ချထားရေးအတွက် တီဗီ သတင်းစာတို့ကို ကန့်သတ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဂျီအန်ပီ ၏ ၈ဝ ရာနှုန်း ကျော်မှာ လယ်ယာကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်မှုမှဖြစ်ပြီး လူဦးရေအများစုမှာ ကျေးလက်နေ လယ်ယာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြသူများ ဖြစ်သည်။
သူတို့အတွက် အစိုးရက ခွင့်ပြုထားသော တီဗီ သတင်းစာ ဂျာနယ် တို့မှလွဲ၍ အခြားသတင်းရစရာ ရေသောက်မြစ်မရှိပါ။ အဆိုပါ အစိုးရ သတင်းစာ တီဗီတို့ကလည်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ ဆူပူအုံကြွမှုများကို ရေးသားဖော်ပြခြင်း မရှိပါ။
သို့သော်ကံကောင်းသည်မှာ အစိုးရက တရားဝင် ခွင့်ပြုမထားသော်လည်း အဓိက မြို့ကြီးများနှင့် နိုင်ငံတဝှမ်းရှိ ဟိုတယ်များတွင် ဂြိုဟ်တုစလောင်းများ ဖမ်းယူ ကြည့်ရှု၍ရနေသည်။ အဆိုပါစလောင်းများအတွက် နှစ်စဉ်ကြေးမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄ဝဝ ပေးရသည်။
ဤစိတ်ပျက်ဖွယ် စာရင်းအင်းများကိုကြည့်လျှင် မြန်မာအစိုးရအဘို့ အင်တာနက် လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာများမှ အုံကြွမှုများ ပေါက်ကွဲထွက်လာမည်ကို စိုးရိမ်ရန် အကြောင်းမရှိပါ။
ဤသို့ အင်တာနက်မှတဆင့် ပေါက်ကွဲလာမည့် အုံကြွမှုမျိုး မဖြစ်နိုင်ဟု ဆိုလျှင် ၁၉၈၈ တုန်းကလို၊ သံဃာတော်များဦးဆောင်သည့် ၂ဝဝ၇ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးမျိုးလို မြန်မာလူထုကို လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြလာအောင် လုပ်နိုင်သည့် အချက်က ဘာလဲ ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာသည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ် ပြောကြားခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိသည်။ အာရပ်နိုင်ငံများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့အကြား အဓိက ကွာခြားချက်ကြီးများကြောင့် မကြာမတင် ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် နောက်ထပ် ဆူပူအုံကြွှမှုတခု ဖြစ်လာမည့်အရေးမှာ စိတ်ကူးကြည့်ရန်ပင် ခဲယဉ်းသည်။
မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်နှင့် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများထက် များသော်လည်း ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပညာရေးမှာ အတော် ကွာခြားသည်။ အနောက်နိုင်ငံများနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သော နိုင်ငံများမှာ ပဋိပက္ခကို အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းသည့် အစဉ်အလာများနှင့် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း တထောင် နှစ်ထောင် အတွင်း ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြသူများ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ လူဦးရေ ၉ဝ ရာနှုန်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာအရ လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး မြတ်နိုးသော အကြမ်းမဖက်လိုသော နှလုံးသားရှိကြသူများ ဖြစ်သည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဆန္ဒပြပွဲများတွင် ပါဝင်သူ ခေါင်းဆောင်အများမှာ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ် အမေရိကန် တို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ကြသူများ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ ထိုသို့ ပညာသင်ကြားခဲ့သူမှာ လက်တဆုပ်စာမျှသာရှိပြီး ပညာသင်ပြီးလျှင် ကိုယ့်နိုင်ငံ ပြန်လာလိုသူကလည်း အနည်းငယ်သာရှိသည်။
၁၉၆၄ ပုဂ္ဂလိကနှင့် မစ်ရှင် ကျောင်းများကို ပြည်သူပိုင် သိမ်းလိုက်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပုံမှန်ပညာရေးမှာ ဂျွမ်းထိုးမှောက်ခုံ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ ကျောင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များ၏ ပညာရေး အဆင့်အတန်းမှာ ဆိုးဆိုးရွားရွား ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်မရှိ၊ စာကောင်းကောင်းမတတ်သည့် မျိုးဆက်များသာ ပေါ်ထွက်လာသည်။
၁၉၈၈ နှင့် ၂ဝဝ၇ လူထုအုံကြွှမှုများကို စစ်တပ်က အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲနှိမ်နင်းလိုက်သည့် အတွက်ကြောင့်လည်း မြန်မာလူထုမှာ အကြောက်တရား လွှမ်းမိုးနေသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မကြာသေးခင်က နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်လာသည့် အခါတွင်လည်း လူထုနှင့်သူ ပထမဆုံး တွေ့ဆုံစကားပြောသည်ကို သွားနားထောင်ရန် မြန်မာလူမျိုးအများအပြား ကြောက်ရွံ့နေခဲ့ကြသည်။
အတွေ့အကြုံများအရ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးထက် အာဏာသိမ်းနိုင်ချေသာ ပိုရှိသည်။
လျှို့ဝှက်ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယိုရိုက် မှတ်တမ်းတင်မည်ကို ကြောက်နေကြသည်။ ၂ဝဝ၇ ဆန္ဒပြပွဲများ အပြီးတုန်းကလည်း ထိုဓာတ်ပုံများ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကိုကြည့်ပြီး ညအချိန်အိမ်မှ လာဆွဲသွားခဲ့ကြသည်။ လူငယ်များ စစ်အစိုးရကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ဖော် မဆန့်ကျင်လိုကြခြင်းမှာ သူတို့ကို ဖမ်းဆီးသွားသည်နှင့်မပြီး ကျန်ရစ်သည့် မိသားစုကိုပါ ဆက်ဒုက္ခပေးမည်ကို မခံလိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ယခုအထိ ထောင်ထဲတွင် အကျဉ်းကျနေဆဲ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဦးရေ ၂၂ဝဝ ဆိုသည်က စစ်အစိုးရ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကို အမြဲပြနေသည်။
စစ်တပ်အတွင်း အက်ကြောင်းများ၊ မကျေနပ်မှုများ၊ အချင်းချင်းအကြား မနာလိုပြိုင် ဆိုင်မှုများက စစ်အစိုးရကို ဖြုတ်ချနိုင်လိမ့်မည်ဟု မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူအများက ပြောဆိုကြသည်။ သို့သော် အတွေ့အကြုံများအရ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးထက် အာဏာသိမ်းနိုင်ချေသာ ပိုရှိသည်။ စစ်တပ်အတွင်း သီးခြား စင်ပြိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် စီးပွားရေးကို ထူထောင်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ သူတို့တွင် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်၊ ဆေးရုံ၊ နေအိမ်တန်းလျားများ အပြည့်အစုံရှိပြီးဖြစ်သည်။
သူတို့သာလျှင် တိုင်းပြည်မပြိုကွဲအောင် ကယ်တင်နိုင်သည့် သူများ၊ ရေပေါ်ဆီ အထက်စီး လူတန်းစားဟု စစ်ဗိုလ်တွေ အတွေးပေါက်နေကြသည်။ အရပ်သားလူထုကို နိမ့်ကျသူများအဖြစ် အထင်သေး အမြင်သေး ဆက်ဆံကြသည်။
၁၉၈၈ ဆန္ဒပြပွဲများ ပြီးကတည်းက မြန်မာလူထု ကောင်းကောင်း သင်ခန်းစာရသွားသည်။ နောက်ထပ် အာဏာရှင်အသစ်တဦး မပါဘဲ အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေဝင်းကို ဖြုတ်မချနိုင်ဟူသည့် သင်ခန်းစာပင် ဖြစ်သည်။
မြန်မာတို့၏ ဆိုရိုးစကားဖြစ်သော `နောက်လာတဲ့ မောင်ပုလဲ ဒိုင်းဝန်ထက်ကဲ´ ကလည်း ရှိနေသည်။ ဤအချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တကယ့်ကိုမှန်ကန်သည့် အချက်ကြီးဖြစ်သည်။ ဒါဆိုရင် တူနီးရှား၊ အီဂျစ်၊ လစ်ဗျား တို့အတွက်ကော။
အရှေ့အလယ်ပိုင်း ပြည်သူများသည် နောက်ဆုံးတွင် အာဏာရှင် အစိုးရများကို ဖြုတ်ချလိမ့်မည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်က ရှိနေသည်။ သို့သော်မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ ဖေ့စ်ဘွတ် တွစ်တာတို့ကဲ့သို့သော `ကမ္ဘာသစ်´ က အုံကြွမှုသစ်ကို လှုံ့ ဆော်ပေးလိမ့်မည်ဟု ထင်မြင်ယူဆရန် ခက်လှသည်။ မီးပွားကလေးတခုရှိလျှင်တော့ ထိုသို့ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုရှိသည်။ လောင်စာနှင့်စားကုန်ဈေးနှုန်းများ ထိုးတက်သွားပြီး နောက် အဆိုပါမီးပွားလေးက ၂ဝဝ၇ တော်လှန်ရေးကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
(မန္တလာမောင်သည် ရန်ကုန်ရောက်နိုင်ငံခြားသားတဦး၏ ကလောင်အမည်ဖြစ်သည်။)
ဧရာဝတီ Monday, 21 March 2011 13:26
By ဦးသိန်းထိုက်ဦး တနင်္ဂနွေ, 20 မတ် 2011
ဒီတပတ် မြန်မာ့အရေး ဒီမိုကရေစီဆွေးနွေးခန်းမှာ ဦးသိန်းထိုက်ဦး က မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နဲ့ ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အင်တာနက်ကနေတဆင့် ပြည်တွင်း-ပြင်ပ ဆက်သွယ်စကား ပြောဆိုနေမှုတွေကို ကန့်သတ်တားမြစ်လိုက်တဲ့ ဥပဒေထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အခြေစိုက်၊ ကွန်ပြူတာနည်းပညာ ဖြန့်ဝေနေတဲ့ မြန်မာ့သတင်းဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာအဖွဲ့ (BIT - Burma Information Technology) အဖွဲ့က မန်နေဂျာ ကိုအောင်ကျော်မျိုး ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးသုံးသပ် တင်ပြထားပါတယ်။
ဦးသိန်းထိုက်ဦး ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ကွန်ပြူတာ အင်တာနက်ကနေ ပြည်ပနဲ့ ဆက်သွယ်စကားပြောနိုင်တဲ့ Skype, Gtalk, Pfingo, VZO စတာတွေကို သုံးပြီး ဆက်သွယ်ပြောဆိုတာမျိုးတွေ မလုပ်ဖို့ မကြာသေးခင်ကပဲ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး စာတိုက်နဲ့ ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အင်တာနက်ကနေ အသံနဲ့ အရုပ်နဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ VOIP (Voice over Internet Protocol) ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အင်တာနက်ဆိုင်တွေကနေ ဈေးနှုန်းချိုချိုနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အတွက် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ တရားဝင် နိုင်ငံခြားခေါ်ဆိုမှုနှုန်း ကျဆင်းပြီး နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေ ထိခိုက်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလို ဆက်သွယ်ပြောဆိုတာတွေ လုပ်မယ်ဆိုရင် တည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေ ရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီလို ကန့်သတ်ချက်တွေ ထုတ်ပြန်လာတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံအခြေစိုက် ကွန်ပျူတာနည်းပညာ ဖြန့်ဝေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်တဲ့ BIT (Burma Information Technology) အဖွဲ့က မန်နေဂျာ ကိုအောင်ကျော်မျိုးကို ကျနော် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အင်တာနက်တွေကိုသုံးပြီး ဆက်သွယ်စကားပြောနေတဲ့ အနေအထားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုလို စပြောပြပါတယ်။
ကိုအောင်ကျော်မျိုး ။ ။ ကျနော်တို့တွေ့သလောက်ကတော့ မြို့ကြီးတွေမှာပေါ့လေ၊ အထူးသဖြင့် Internet Access အင်တာနက် ရနေတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ လူတော်တော်များများ၊ လူငယ်တွေ တော်တော်များများက နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ် လုပ်ကြတာပေါ့လေ။ အဲဒီလူတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ မိသားစုတွေက သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုး သားချင်းတွေကို ခေါ်ချင်လို့ရှိရင် အင်တာနက်ကနေတဆင့် ဖုန်းခေါ်ကြတယ်။ အဲဒါကိုပဲ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးနေကြတယ်လို့ ကျနော်တို့ သိရတယ်။
ဦးသိန်းထိုက်ဦး ။ ။ အင်တာနက်သုံးတဲ့သူတွေ၊ ပြည်တွင်းက လူတွေကိုလည်း ဆက်သွယ်မေးကြည့်တော့ သူတို့က စာတိုက်နဲ့ ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးက တယ်လီဖုန်းကို သုံးပြီးတော့ နိုင်ငံခြားနဲ့ စကားပြောမယ်ဆိုရင် ဈေးသိပ်ကြီးတယ်၊ FEC နဲ့ ပေးရတယ်၊ အင်တာနက်က သုံးရတာက ဈေးသိပ်ချိုပြီးတော့ ဈေးကလည်း သိပ်ကွာတဲ့အတွက်ကြောင့် အင်တာနက်ကနေ ဆက်သွယ်တာက ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဒီတော့ အများပြည်သူ အဆင်ပြေနေတဲ့ကိစ္စကို အစိုးရဘက်က ပိတ်ပင်ဟန့်တားတာမျိုးတွေ လုပ်မယ်ဆိုရင် အင်တာနက်သုံးစွဲတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ တခြားနည်းလမ်းနဲ့ ဆက်သွယ်လို့ ရတာမျိုးတွေကော ရှိနိုင်မလား။
ဦးအောင်ကျော်မျိုး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ များသောအားဖြင့် သူတို့ ပိတ်မယ်ဆိုတာက ဘယ်လိုပိတ်သလဲ ဆိုတာ ကတော့ ကျနော်တို့မသိဘူးပေါ့လေ။ ဆက်သွယ်ရေးဌာနက သူတို့ဝင်ငွေတွေ လျော့တဲ့အတွက် အင်တာနက် Café တွေမှာ ဒီဟာတွေကို သုံးခွင့်မပြုဖို့ တားတယ်ပေါ့လေ။ ဒီလိုမျိုး အမိန့်ထုတ်ပြီး တားရုံနဲ့ကတော့ ပိတ်ဆို့ တာတော့ သိပ်မလွယ်ဘူးပေါ့လေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ internal သုံးတဲ့ဟာ။ ဒီဟာသုံးဖို့အတွက်က ကျနော်တို့ account တခု ရှိနေလို့ရှိရင် သုံးလို့ရနေတဲ့အတွက် ဘယ်လို ပိတ်မလဲ။ အဲဒီ Cyber ကြီးတခုလုံးကို ပိတ်လိုက် မှာလား။ ကျနော်တို့လည်း သေချာတော့ မသိဘူး။ တကယ်လို့ ဥပမာ- Skype ကို ပိတ်မယ်ဆိုရင် Skype လိုမျိုး၊ ဒီလိုမျိုး VOIP ခေါ်တာပေါ့။ အင်တာနက်ကနေတဆင့် ဖုန်းခေါ်တဲ့ဟာတွေကိုပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက ကမ္ဘာမှာ အများကြီးရှိတယ်။ သူတို့ အဲဒါတွေကို အကုန်ပိတ်မှာလား။ အဲဒါတွေကို ကျနော်တို့ မရှင်းဘူး။ အဲဒီလို ပိတ်မယ်ဆိုတာကို မရှင်းဘူး။
ဦးသိန်းထိုက်ဦး ။ ။ လွယ်လွယ်ကူကူရော ပိတ်လို့ ရမယ်လို့ ထင်ပါသလား ခင်ဗျား။
ဦးအောင်ကျော်မျိုး ။ ။ ကျနော်တို့သိသလောက်တော့ အင်တာနက် မပိတ်လို့ကတော့ အဲဒါကို ပိတ်ဖို့ လမ်း မရှိဘူးလေ။
ဦးသိန်းထိုက်ဦး ။ ။ နောက်တခုက အင်တာနက်ဆိုင်တွေကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖိအားပေးတာမျိုး ဆိုရင်ရော ဗျာ။ အဲဒီ VOIP Call ခေါ်တာတွေ မလုပ်ရဘူးဆိုပြီး တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်တာမျိုးဆိုရင် အင်တာနက်ကနေ ဆက်သွယ်တာတွေ လုံးဝရပ်စဲသွားတာမျိုး မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
ဦးအောင်ကျော်မျိုး ။ ။ စောစောကပြောသလို နှစ်ပိုင်းရှိနေတာပေါ့လေ။ ကျနော်တို့ ဗမာပြည်မှာကတော့ အင်တာနက် အဆက်အသွယ်တွေ၊ အင်တာနက်ရဖို့ကတော့ ခက်တယ်ပေါ့လေ။ ဥပမာ- အိန္ဒိယလို နိုင်ငံမျိုးမှာ အိမ်တိုင်းမှာ အင်တာနက်ရှိနေတယ်။ အင်တာနက်ဆိုင်လည်းရှိတယ်။ တော်တော်များများကတော အိမ်မှာ အင်တာနက်ရှိနေတယ်။ ကိုယ့်အိမ်ကနေ ကိုယ်သုံးတာကို ဘယ်သူက ပိတ်မှာလဲ။
ဒါပေမဲ့လည်း တခုရှိတာက ဗမာပြည်မှာက အများစုက အင်တာနက် Café ကနေ သုံးကြတဲ့အဆင့်ဆိုတော့ အင်တာနက် Café တွေကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ သာမန်အများစုက ဈေးပေါပေါနဲ့ ခေါ်လို့ရတဲ့ဟာတွေက ခေါ်လို့ မရဘဲနဲ့ ငွေတွေအများကြီးပေးမှ ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုး သားချင်းနဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ဖုန်းခေါ်နိုင်မယ့်အဆင့်ကို ရောက်သွားမှာပဲ။
ဦးသိန်းထိုက်ဦး ။ ။ အာဏာပိုင်တွေဘက်က အကြောင်းပြတာကတော့ အင်တာနက်က ပေးနေတဲ့ VOIP Call တွေကြောင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ တရားဝင် နိုင်ငံခြားခေါ်ဆိုမှုနှုန်း ကျဆင်းပြီးတော့ နိုင်ငံတော် ၀င်ငွေ ထိခိုက်တယ်ပြောပါတယ်။ အဲဒီတော့ ပြည်သူတွေဆီကရတဲ့ တယ်လီဖုန်းခက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတော် ၀င်ငွေအတွက် သိပ်အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခု ဖြစ်နေတာမျိုး။ ဆိုလိုတာက ပြည်သူတွေဆီက တယ်လီဖုန်းခတွေ ရတာနည်းသွားရင် တိုင်းပြည်စီးပွားရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကို ထိခိုက်နိုင်လောက်တဲ့ အနေ အထားမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အာဏာပိုင်တွေဘက်က မဖြစ်မနေ အရေးယူရတဲ့ အနေအထားမျိုး မဖြစ်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျား။
ဦးအောင်ကျော်မျိုး ။ ။ ကျနော်တို့သိသလောက်ကတော့ Internet Access ကနေပြီးတော့ သူတို့သိပ်ပြီးတော့ အစိုးရရဲ့ ဘတ်ဂျက်ထဲမှာ အများကြီးတော့ သတိမထားမိဘူး။ ဒါပေမဲ့လို့ တပိုင်းရှိတာက ကျနော်တို့နိုင်ငံက အာဏာရှင်နိုင်ငံဆိုတဲ့အတွက် monopoly - စီးပွားရေးကို တဦးတယောက်ထဲကနေ ချုပ်ကိုင်ထားတာတွေကနေပြီးတော့ သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတော့ ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ လူကိုတော့ နစ်နာသွားတာ ရှိတာပေါ့။
ဥပမာ အိန္ဒိယမှာဆိုရင် ဟိုးအရင်တုန်းက Landline ဖုန်းခေါ်ခတွေက ဈေးကြီးတယ်။ နိုင်ငံခြားတင်မဟုတ်ဘူး။ local ပေါ့လေ။ တခြားမြို့ရွာ ကိုယ်နဲ့ မတူတဲ့ မြို့ရွာကို ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် STD လို့ ခေါ်တယ်။ အဲလိုမျိုးဟာတွေကအစ ဈေးကြီးတယ်။ အင်တာနက်တွေပေါ်လာတော့ ကျနော်တို့ အိန္ဒိယမှာတွေ့တဲ့ အတွေ့အကြုံအရဆိုရင် အင်တာနက်တွေ ပေါ်လာတဲ့အခါ VOIP အင်တာနက်ဖုန်းခေါ်မှုတွေ လုပ်လာတော့ သူတို့ဆက်သွယ်ရေးမှာ ခေါ်တဲ့သူ မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ သူတို့က အဲဒါတွေနဲ့လိုက်ပြိုင်ရတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဖုန်းခေါ်ခတွေကို အကုန်လျှော့ပေးရတယ်။ အခု အိန္ဒိယအတွင်းမှာ ကြိုက်တဲ့ဘယ်မြို့ကိုပဲခေါ်ခေါ် local ပဲ။
နောက်တခု ဟိုးအရင်တုန်းက ဘာဖြစ်လို့ စေ့စပ်နိုင်တာလည်းဆိုတော့ ဖုန်းတွေခေါ်တဲ့အခါမှာ rate တွက်တာ မိနစ်နဲ့တွက်တာ။ တမိနစ်ကို ထားလိုက်ပါတော့- တစ်ကျပ်ဆိုရင် တစ်မိနစ်ကျော်သွားတာနဲ့ တပြိုင်တည်း နှစ်ကျပ် ဖြစ်သွားတယ်။ တစ်မိနစ်ရယ်၊ တစ်စက္ကန့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒီမှာ VOIP က ဘာသာလဲဆိုတော့ သူက စက္ကန့်နဲ့ တွက်တာ။ အဲဒီကျတော့ အိန္ဒိယမှာ ဖုန်းတွေက ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ စက္ကန့်နဲ့ တွက်တော့တယ်။ အခုဆိုရင် နဂိုရ်တုန်းက local call တစ်ကျပ်ဆိုရင် အခု ပြား ၆၀၊ ပြား ၆၀ ဟာ တမိနစ် မဟုတ်ဘူး။ တစက္ကန့်မှာ တပြား။
ဦးသိန်းထိုက်ဦး ။ ။ အဲတော့ ကိုအောင်ကျော်မျိုးဆိုလိုတာက အိန္ဒိယမှာဆိုရင် အင်တာနက်ကနေ ဖုန်းတွေ သုံးတာများလာတဲ့အတွက် အစိုးရက တယ်လီဖုန်းခတွေကို လျော့ပေးခဲ့ရတယ်။
ဦးအောင်ကျော်မျိုး ။ ။ ဟုတ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါတွေက သိမ်းလို့ မရဘူးလေ။ စောစောက ပြောသလို account ရှိတယ်၊ အင်တာနက်ရှိတယ်၊ ။ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ် သုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ အဲဒါကို ကျနော်က Skype ကို သုံးလို့မရ၊ မသုံးနဲ့လို့ ပြောလို့မရဘူး။
ဥပမာ ဒီနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် ကျနော်တို့ ဗမာပြည်မှာဆိုရင် credit card တွေ ဘာတွေ မရှိဘူး။ ဒီနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ ကိုယ့်မှာ credit card တွေလည်းရှိတယ်။ debit card တွေလည်း ရှိတယ်။ အင်တာနက်ဖုန်း၊ Skype တို့ ဘာတို့က ဘာမှ မခက်ဘူး။ လူတိုင်းဖွင့်နိုင်တယ်။ bank account ရှိတဲ့ လူတိုင်း ဖွင့်နိုင်တယ်။ ကိုယ့် account ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖွင့်တာကို အစိုးရက ဘာဥပဒေနဲ့မှ တားလို့ မရဘူး။ ဒါဟာ ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ပဲ။ နောက်တခုက consumer rights စားသုံးသူတွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပဲ။ ကျနော်တို့ဆီမှာတော့ စားသုံးသူတွေက လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် မရှိတဲ့ ပြဿနာပေါ့။ နောက်တခုက စောစောကပြောသလို သူတို့က အားလုံးကို dominate, monopolize လုပ်ထားတယ်၊ သူတို့က ထိန်းချုပ်ထားတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့သတ်မှတ်တဲ့ ဈေးကွက်က သတ်မှတ်တာ မဟုတ်ဘဲ အစိုးရက သူတို့ ကြိုက်သလို သတ်မှတ်ထားတယ်။
ဦးသိန်းထိုက်ဦး။ ။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖုန်းဆက်မယ်ဆိုရင် အပြင်ကပဲခေါ်ခေါ်၊ အတွင်းကပဲ အပြင်ကိုခေါ်ခေါ် တယ်လီဖုန်းခကတွေကတော့ တခြားနိုင်ငံတွေထက် ပိုပြီးတော့ ဈေးကြီးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီတယ်လီဖုန်းခတွေ ဈေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုရော ဘယ်လို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိပါသလဲ။ ဘာကြောင့်လို့ ကိုအောင်ကျော်မျိုးတို့ သုံးသပ်ပါသလဲ။
ဦးအောင်ကျော်ဦး ။ ။ နှစ်ခုရှိတယ်။ သူတို့နည်းပညာ မမြင့်ရင် အရင်တုန်းက တယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေက ကြိုးတွေနဲ့သွားကြတယ်။ ကြိုးလိုင်းတွေအတိုင်း ကြိုးလိုင်း ဘယ်နှစ်မီတာရှည်လဲ ပေါ့လေ။ ကီလိုမီတာ ဘယ်လောက်ဆိုရင် အရင်တုန်းက rate က ဘယ်လောက်၊ အဲဒီထက်ကျော်သွားရင် ကီလို မီတာ ၁၀၀ ကို အိန္ဒိယမှာ ရူပီး တစ်ကျပ်ဆိုရင်၊ ကီလိုမီတာ ၁၀၁ ဆိုရင် ရူပီး နှစ်ကျပ် ဖြစ်သွားတယ်။ အဲလိုမျိုးနဲ့ တွက်တာတွေ ရှိတယ်ပေါ့။ ဒါက ပထမဦးဆုံး ဖုန်းခ ယူနည်းတွေ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာက ကီလိုမီတာနဲ့ မတွက်တော့ဘူး။ ကီလိုမီတာ ဘယ်လောက်ပဲဝေးဝေး access ရှိမရှိနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Station ရှိမရှိနဲ့ပဲ တွက်တယ်။ ဥပမာ- ကျနော်က ဒေလီမှာနေတယ်။ ကျနော်တို့ နယ်စပ်ဆိုရင် ကီလိုမီတာ လေး-ငါးထောင်လောက် ရှိတယ်။ အိန္ဒိယ အကျယ်အ၀န်းနဲ့ဆိုရင် ၄ ထောင် ဖြစ်ပါလေ့စေ၊ သူ့ရဲ့ station ရှိတဲ့အတွက် ဒီ station နဲ့ ဟို station နဲ့ အတူတူပဲ - ကုမ္မဏီတခုတည်း ဖြစ်တဲ့အတွက်။ အကွာအဝေးကို မတွက်တော့ဘူး။
ဦးသိန်းထိုက်ဦး ။ ။ အင်တာနက်သုံးတဲ့ ကိစ္စဘက်ကို ပြန်ပြီးတော့ လှည့်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက်ကို လူငယ်တွေကြားမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးလာတယ်ဆိုပေမယ့် အင်တာနက် ကန့်သတ်မှုတွေကတော့ အကြီးအကျယ် ရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုကြတာမျိုးတွေ ကြားရပါတယ်။ အဲဒီတော့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့စာရင် အကန့်အသတ်တွေ ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် အင်တာနက် သုံးစွဲတဲ့အခြေအနေက အရင်နဲ့စာရင်တော့ တိုးတက်လာတယ်လို့ မပြောနိုင်ဘူးလား။ အင်တာနက်သုံးနေတဲ့ အခြေအနေပေါ်မှာ ဘယ်လိုမြင်ပါလဲ။
ဦးအောင်ကျော်မျိုး ။ ။ ဗမာပြည်မှာတော့ အင်တာနက်ကို သုံးခွင့်ရှိပေမဲ့ filter လုပ်ထားတယ်ပေါ့လေ။ သူတို့ခွင့်ပြုတဲ့ site တွေမှပဲ ကြည့်လို့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စာမျက်နှာ (site) တွေ၊ သူတို့ အစိုးရကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ ပါနေလို့ရှိရင် အဲလိုမျိုး site တွေကို ကြည့်လို့မရအောင် server ကနေ ကြည့်လို့မရအောင် တားမြစ်ထိန်းချုပ်ထားတယ်။ အဲဒါတွေက Information Rights ကို ပိတ်ပင်တာပေါ့လေ။ သတင်းရပိုင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားတာတွေရှိတယ်။
နောက်တခုက ကျနော်သိသလောက် ဗမာပြည်မှာတော့ အင်တာနက်ကို တကယ် ပေးနိုင်သလောက်ကို အသုံးမချနိုင်သေးဘူး။ ဥပမာ- ဒီနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် အင်တာနက်က Information အတွက် အဓိက ရရှိတဲ့နေရာ ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ ကျောင်းသားတွေအတွက်ရော၊ သုတေသနပြုသူ (researcher) တွေအတွက်ရော အားလုံးအတွက်ပေါ့လေ။ ဗမာပြည်မှာတော့ ကျောင်းတွေမှာလည်း အင်တာနက်ပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ ကြည့်လို့မရတဲ့ စာမျက်နှာ (site) တွေများတယ်။ နောက် အင်တာနက်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် သုံးခွင့်မရှိဘူးပေါ့လေ။
ဦးသိန်းထိုက်ဦး ။ ။ ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက် သုံးရတာ ဆက်သွယ်မှု (connection) တော်တော်နှေးတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ ဒါကလည်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ အာရပ်ကမ္ဘာမှာ လူမှုရေးကွန်ယက်တွေ (social network) ကိုသုံးပြီးတော့ ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ စည်းရုံးလှုပ်ရှားတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အင်တာနက်တွေ သိသိသာသာ ပိုပြီး နှေးသွားတယ်ဆိုပြီး ပြောကြတာမျိုးပါ။ ဒီ အင်တာနက် နှေးသွားတဲ့ကိစ္စ၊ ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုတွေ ရှိလာတယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စကရော တခြား နိုင်ငံတွေမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ လူထုအုံကြွမှုတွေနဲ့ ဆက်စပ်တယ်လို့ ကိုအောင်ကျော်မျိုးတို့ မြင်မိပါသလား။
ဦးအောင်ကျော်မိုး ။ ။ ကျနော်တို့ အင်တာနက်တွေ နှေးသွားတာကတော့ အာရပ်ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကို ဒီဘက်ကို ပျံ့မလာအောင် ထိန်းချုပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖုန်းလိုင်းကတော့ ကျနော်တို့လည်း သေသေချာချာမသိဘူးပေါ့လေ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သေချာတဲ့အချက်က ကျနော်တို့ ဗမာပြည်မှာ ဖုန်းလိုင်းကနေ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တာ (campaign) လုပ်တာ တော်တော့ကို နည်းတယ်။
ဖုန်းလိုင်းဆိုတာက အထူးသဖြင့် SMS (Short Message Service) တွေ ဘာတွေနဲ့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တာ (campaign) လုပ်တာ ကျနော် သိသလောက်ဆိုရင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မရှိသေးဘူး၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မကြားမိသေးဘူး။ ကျနော်တို့ နားလည်သလောက်ကတော့ စောစောကပြောသလို ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှာ ၀င်ငွေတွေ လျော့သွားတာတော့ တော်တော့ကို ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြီးက တိုင်းပြည်တခုလုံးနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ နည်းနည်းလေးဖြစ်ပေမဲ့ သူတို့ဌာနတခုတည်းမှာတော့ သိသိသာသာ လျော့သွားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဆီကနေ ပြည်ပကို ခေါ်ဆိုမှုတွေ မရှိသလောက် နည်းသွားမယ်။ ပြည်ပကနေ ဗမာပြည်ထဲကို ခေါ်တဲ့အခါမှာလည်း VOIP ကနေ တဆင့် ခေါ်လို့ရှိရင် သူတို့ဆီကို ဖြတ်စရာမလိုဘဲနဲ့ အင်တာနက်ကနေတဆင့် ဖြတ်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သူတို့ ၀င်ငွေကို အဓိက ထိန်းချုပ်ချင်တာ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။
အဓိက နစ်နာမှာကတော့ သာမန်စားသုံးသူတွေ အကုန်လုံးနစ်နာမှာပဲ။ အကျိုးရှိမှာကတော့ ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနက အကျိုးရှိနိုင်တယ်။ သူတို့နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ အကျိုးရှိနိုင်တယ်။ အဲဒါကလွဲပြီး ဘယ်သူ့ ကိုမှ အကျိုးမရှိနိုင်ဘူး။ ဒါကတော့ ရှင်းနေတဲ့-မြင်သာတဲ့ဟာပေါ့။
ဦးသိန်းထိုက်ဦး ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ အင်တာနက်တွေကနေ ဗွီဒီယို၊ တယ်လီဖုံးနဲ့ ဆက်သွယ်စကားပြောမှုတွေကို မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နဲ့ ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနက ကန့်သတ်ဖို့ ကြိုးစားလာတဲ့အပေါ် အိန္ဒိယနိုင်ငံအခြေစိုက်၊ ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ ဖြန့်ဝေနေတဲ့ BIT (Burma Information Technology) အဖွဲ့က မန်နေဂျာ ကိုအောင်ကျော်မျိုး ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါ။
Australiaနိုင်ငံမှNew South Walesပြည်နယ်ဗြိတိန်နို...
ပါလီမန်ခေတ် ဥပဒေအတွင်း တိုက်ပွဲတခု